दाँत सेतो र चम्किलो बनाउने घरेलु काइदा, जानिराखाैँ - ज्ञानविज्ञान
यसलाई बनाउनको लागि सबैभन्दा पहिले एक कचौरामा बेकिङ सोडा र पानी मिसाएर एक गाढा पेस्ट बनाउनुहोस् ।
अब यो पेस्टमा पुदिनाको केही थोपा मिसाएर ब्लेन्ड गर्नुहोस् । पेस्ट गाढा होस् भन्ने कुरामा ध्यान दिनुहोस् ।
अब यो पेस्टलाई कुनै भाँडामा राखेर कुनै चिसो ठाँउमा राख्नुहोस् ।
तपाईंको टुथपेस्ट तयार भयो । यो पेस्टले दैनिक बिहान बेलुका ब्रस गर्न सक्नुहुन्छ ।
Don't Miss it एक दिनमा मानिसलाई कति प्रोटिनको आवश्यकता पर्दछ ? जान्नुहोस् कुन खानेकुरामा कति प्रोटिन हुन्छ ?
Up Next अनुहार सुन्दर बनाउने चाहना भए व्युटी फुड्सको प्रयोग गर्नुस्